काठमाडौंमा यी रसियन युवतीहरु जो १० हजार तिरेपछि जहाँ पनि जाने आउने गर्छन्, यसरि नेपालमै अड्डा जमाएर गर्दै छन् यौनधन्दा ! – Etajakhabar
भनिरहनु नपर्ला, राजधानीको यौनबजारमा अब नेपाली युवती मात्रै छैनन्, विदेशी पनि उत्तिकै छन् । रसियन युवतीहरुले त अपार्टमेन्टमा महँगो भाडा तिरेर यौनधन्दा नै चलाइरहेका छन् । विदेशबाट यहाँ आएर कसरी चलाइरहेका छन् त उनीहरुले धन्दा ? अनिल यादवले रसियन युवतीको यौन अखडामै पुगेर तयार पारेको रिपोर्ट ।
तीन महिनाअघि शुक्रबारले विदेशी यौनकर्मीबारे कभरस्टोरी गर्दा महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचोरका तत्कालिन डिएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले भनेका थिए, ‘रसियन युवतीहरु अपार्टमेन्ट नै खोलेर यौनधन्दामा सक्रिय छन् भन्ने सुनेको छु तर प्रमाण र उजुरी नहुँदा कारबाही गर्न सकिएको छैन ।’
नेपाली यौनबजारमा ‘अफ्रिकी कलगर्ल’बारे कभरस्टोरी लेखेपछि यो संवाददाता रसियन युवतीहरुको अपार्टमेन्टको खोजीमा थियो । लामो प्रयासपछि एक रेस्टुराँ व्यवसायीमार्फत त्यस्तै एक युवतीको सम्पर्कसूत्र फेला पर्यो। एनसेलको मोबाइल नम्बर बोकेकी ती युवतीको फोनमा डायल गरे ।
‘हेलो ?’ ‘यस’ ‘के छ खबर ?’ ‘फाइन । केही काम थियो कि ?’ ‘तपाईंसँग भेट्न मन लागेको थियो ?’ ‘त्यसो भए पैसा लिएर आऊ । म कोठामै छु ।’
संवाद टुंगिन नपाउँदै उनले फोन काटिन् । संवाददातालाई ती युवती बस्ने अपार्टमेन्ट र कोठाबारे केही पनि जानकारी थिएन । मात्र मोबाइल नम्बर प्राप्त थियो ।
फेरि मोबाइलमा म्यासेज पठाएँ, ‘लोकेसन त बिर्सिएँ, कहाँ पो थियो ?’
रिप्लाई आयो– … अपार्टमेन्ट (काठमाडौंको चर्चित अपार्टमेन्टको नाम थियो) । कोठा नम्बर ३०२ ।
ती युवतीले पैसा लिएर मात्र आउनू भनेकी थिइन् तर कति त्यसबारे छलफल भएको थिएन । फेरि फोन डायल गरेँ ।
‘हेलो ?’ ‘यस, के भयो ? ’ ‘पैसा कति लाग्छ, म आउँदैछु ।’ ‘वान टाइम, टेन थाउजेन (एकपल्टको १० हजार रुपैयाँ)।’ ‘ओके ।’
००० संवाददाताले तीन महिनाअघि रिपोर्टिङ गर्दा नै खुलिसकेको थियो– काठमाडौंको यौनबजारको नक्सा अब बदलिइसकेछ । यहाँ नेपाली यौनकर्मी मात्र नभएर विदेशी यौनकर्मी पनि प्रशस्तै भेटिन थालेछन् । भारतीयसँगै, चिनियाँ र केन्याली यौनकर्मीसम्म यहाँ सक्रिय छन् । रिपोर्टिङका क्रममा काठमाडौंको क्यासिनो, पब, बार, डिस्को जताततै विदेशी यौनकर्मीको उपस्थिति रहेको पाइयो । त्यतिबेला भेटिएका अधिकांशले होटललाई अखडा बनाएर यौन धन्दा गरिरहेको पाइएको थियो तर रसियन युवतीहरुले त यहाँ फ्ल्याट नै लिएर यौन अखडा सञ्चालन गरेका रहेछन् ।
आफ्नै कोठामा संवाददातालाई तस्बिरका लागि पोज दिँदै डिनारा
सोमबार साँझको ६ बजे । एक सहकर्मीसहित संवाददाता दिइएको लोकेसनमा पुग्यो । ती युवतीले जहाँ बोलाइन्, त्यहाँ को–को बस्छन् ? कसको संरक्षणमा अपार्टमेन्टमै धन्दा चल्ने गरेको छ ? त्यसबारे केही जानकारी थिएन । त्यसैले संवाददाताको मनमा प्रश्न र डर दुवै थियो ।
कोठाबाहिर पुगेपछि संवाददाताले फेरि कल गर्यो र आइपुगेको जानकारी दियो ।
नीलो वनपिस, खुला छोडिएको कपाल, घाँटीमा सेता लकेट, ओठमा रातो लिपस्टिक लगाएकी सेतो वर्णकी एक युवती ढोका खोल्न आइपुगिन् अनि मुसुक्क मुस्कुराइन् ।
‘हाई आई एम डिनारा, कम हेयर’
सबैले आ–आफ्नो परिचय दिएपछि उनले भित्र किचन रुममा लगिन् । डाइनिङ टेबलमा बसाइन् । टेबलमा वाइन र स्प्राइटका बोतलहरु थिए । बिस्कुट पनि थियो । डिनाराले लिन आग्रह गरिन् । दुवैले स्प्राइट र बिस्कुट लियौँ ।
फ्ल्याटमा तीनवटा कोठा र एउटा ठूलो किचन रुम थियो । प्रत्येक कोठामा ऐना र मेकअप सामग्री प्रशस्तै देखिन्थे । दुई जना पाका उमेरका रसियन महिला एउटा कोठामा कतै जानलाई तयारी गरिरहेका थिए । अर्को कोठामा सेतो टिसर्ट लगाएकी युवती फोनमा मस्त गफिइरहेकी थिइन् । फोनमा उनले बोलिरहेको भाषा न नेपाली थियो, न अंग्रेजी । सायद आफ्नै देशको मौलिक भाषा बोलिरहेकी थिइन् उनी ।
संवाददाताले एक राउन्ड सबै कोठाको फन्को लगाएपछि पुनः डाइनिङ टेबलको कुर्सीमा आइपुग्यो । स्प्राइट र बिस्कुटसँगै संवाद जारी रह्यो ।
‘तिमीहरु कति जना यहाँ बस्छौँ ?’ ‘पाँच जना । अहिले एकजना साथी बाहिर छ ।’ ‘कति भयो नेपाल आएको ?’ ‘म त चार महिनामात्र भयो, अरुको त धेरै भयो ।’
सधैँ मुस्कुराइरहने डिनारा खुलेर कुरा गरिरहेकी थिइनन् । कारण– कोठामा बाहिर जानलाई तयार भइरहेकी महिला उनको ‘बोस’ रहिछन् । हातको औँलाले देखाउँदै उनी भनिरहेकी थिइन, ‘उहाँ मेरो बोस हो । उनीहरु बाहिर गएपछि रमाइलो गर्नुपर्छ है ।’
‘बोस’ र अर्की एक महिला ग्राहक खोज्न ठमेलको ‘क्लब’ गएको जानकारी दिँदै बिदा भइन् । फोनमा लामो समयदेखि गफिइरहेकी अर्की युवती नेपाल बसेको एक वर्ष बढी भइसकेको रहेछ । नाम पनि उनले त नेपाली राखेकी रहेछिन्– इन्दिरा ।
एक पटकको १० हजार रुपैयाँ लिने बताएकी उनीहरुले ‘होल नाइट’को ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको खुलाए । ‘यहाँ एकपल्ट आएको ग्राहक फेरि फर्किएर आउँछन्, हामीले दिने सन्तुष्टिले उनीहरुलाई तान्छ,’ थोरै मुस्कुराउँदै इन्दिराले सुनाइन् ।
आफ्नै कोठामा संवाददातालाई तस्बिरका लागि पोज दिँदै इन्दिरा
टार्गेट क्यासिनो तीन महिनाअघि विदेशी यौनकर्मीबारे रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा डिएसपी रौठौरले भनेका थिए, ‘धेरैजसो रसियन युवतीको टार्गेट क्यासिनो हुन्छ रे ! उनीहरू त्यताबाट ग्राहक लिएर आफ्नै फ्ल्याट र अपार्टमेन्ट लान्छन् ।’ संवाददाता स्वयं अपार्टमेन्टमा पुगेर ‘रसियन कलगर्ल’लाई भेटेपछि उनको सूचना मेल खायो ।
आफ्नो खास नाम रोज बताउने इन्दिराले भनिन्, ‘हामी प्रायः ग्राहक क्यासिनोबाट ल्याउँछौँ । कोही कोठामा आउँछन्, कोही उतै कोठा म्यानेज गर्छन् । हाम्रा प्रायः ग्राहक विदेशी नै हुन्छन्, नेपाली एकदमै कम हुन्छन् ।’
सोमबार पनि उनीहरु संवाददातासँगको भेटघाटपछि हयात होटलतर्फ लागेका थिए । भेटघाटपछि थप सूचनाका लागि संवाददाता उनीहरुसँग सम्पर्कमा रहेका थियो । उनीहरु कहिले र्याडिसन त कहिले सांग्रिला होटलमा रहेको बताउथेँ ।
आफूलाई रसियन युवतीहरु एकदमै मनपर्ने बहाना बनाउँदै संवाददाताले दुवैसँग फोटोसमेत खिचेका छन् ।
चप्पलमा चकलेट अपार्टमेन्ट नै लिएर यौनधन्दा चलाइरहेकी ती रसियन युवतीको कोठामा एउटा गजबको दृश्य देखियो । प्रत्येक कोठाको ढोका छेउमा चप्पलहरु थिए । चप्पलमा चकलेटहरु छरिएका थिए । यति धेरै चकलेटहरु छरिएको देखेपछि संवाददाताले डिनारासँग जिज्ञासा राख्यो, ‘यसरी किन चकलेट जथाभावी फ्याँकेको ?’
उनले जवाफ दिइन्, ‘फ्याँकेको होइन, यो त गुडलक हो । चप्पलमा चकलेट राखेपछि गुडलक हुन्छ । तिमीहरुजस्तो ग्राहक धेरै आऊन् भनेर राखेको नि !’
वर्किङ भिसामा धन्दा ! यौनकर्मीको रुपमा सक्रिय विदेशी युवतीहरू कसरी नेपाल आइपुग्छन् ? कोही पर्यटन भिसामा नेपाल आउने र विभिन्न बहानामा भिसा बढाएर बस्ने गरेको र कोही वर्किङ भिसामा आउने गरेको खुल्यो । अफ्रिकी कलगर्लबारे रिपोर्टिङ गर्दा आफू केन्याको बताउने सरिफाले पर्यटक भिसामा नेपाल आएको बताएकी थिइन् । यता संवाददाताले अपार्टमेन्टमा भेटेको डिनाराले आफू वर्किङ भिसामा आएको बताइन् । ‘म आएको बल्ल चार महिना त भयो, अझै १ वर्ष बस्छु, त्यसैले हामी निरन्तर भेटिरहनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
नेपाली यौनबजारमा भेटिएकी ‘अफ्रिकी कलगर्ल’ सरिफाले बताएकी थिइन्, ‘विदेशी युवतीका अधिकांश ग्राहक नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक नै हुन् । हामीलाई विदेशी युवासँग सम्पर्क गर्न र बस्नसमेत सहज हुन्छ । नेपालीसँग त कुरा गर्नै डर हुन्छ किनभने उनीहरु पुलिसमेन पनि हुन सक्छन् ।’
सरिफाको जस्तै भनाइ थियो इन्दिराको पनि । उनी भन्दै थिइन्, ‘यहाँ म जस्ता थुप्रै छन् । नेपालीहरु विदेशी नागरिक सबैलाई पर्यटक ठान्छन् तर यहाँ आउने सबै पर्यटक होइनन्, उनीहरूका आ–आफ्नै बिजनेस छन् ।’
यसरी यौनधन्दा चलाएको कसैलाई थाहा छैन् ? भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले भने, ‘एकदमै सुरक्षित हुन्छ यहाँ । हामी हाम्रो सम्पर्कभन्दा बाहिर मान्छे नै ल्याउँदैनौँ । विशेषगरी नेपालीले सुनाइदिन्छन्, त्यसैले सतर्क रहन्छौँ ।’
आफूले मागेअनुसारको पैसा तिर्न नसक्ने भएकाले पनि उनीहरुले नेपालीसँग कम सम्पर्क राख्ने रहेछन् ।
मौन प्रहरी नेपाली यौनकर्मीका अखडामा छापा मारिएका र पक्राउ परेका समाचार यहाँ खुब आउँछन् तर आफ्नै देशमा विदेशीमूलका युवतीहरु यौन धन्दामा संलग्न रहेकोबारे प्रहरी जानकार नभएको बताउँछ । नेपालमा विदेशी यौनकर्मी छन्, यसबारे तपाईंलाई केही थाहा छ भन्ने प्रश्नमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले भने, ‘मलाई जानकारी छैन, भएछ भने खबर गरौँला है !’
नेपाली यौन बजारमा फाट्टफुट्ट विदेशी यौनकर्मी नभेटिने हैनन् । २०६६ सालमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ठमेलको हिमालयन जाभा रेस्टुराँ पछाडीको तीन तले घरमा छापा मार्दा पूरै घर भाडामा लिएर यौन व्यवसाय चलाएका १४ चिनियाँ युवती पक्राउ परेका थिए । त्यसयता भने विदेशी यौनकर्मी पक्राउ परेका छैनन् । पक्राउ नपरे पनि काठमाडौंमा उनीहरुको उपस्थिति भने बाक्लो छ । यहाँ थुप्रै देशका युवतीहरू कलगःलको रूपमा सक्रिय छन् । अधिकांश विदेशी यौनकर्मीको मिट प्वाइन्ट ठमेल, दरबारमार्ग र ललितपुरको झमेल नै हो । ग्राहकको मागअनुसार उनीहरू उपत्यकाबाहिर समेत जाने गरेको पाइएको छ ।
फेसबुकमा ‘रसियन कलगःल’ संवाददाताले भेटेका दुवै ‘रसियन कलगःल’ इन्दिरा र डिनाराले फेसबुक चलाउँछन् । उनीहरुको मोबाइल नम्बरको सहायताले संवाददाताले फेसबुक पत्ता लगाएको थियो । आफूलाई रसियन बताए पनि फेसबुकमा उनीहरुले आफू कजाकस्तानमा बस्ने र उज्बेकिस्तानबाट आएको भनेर आफ्नो ‘इन्ट्रो’मा जानकारी दिएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार रसियन कलगःलको प्रमुख ‘मिटप्वान्ट’ भने पाँचतारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनो नै हुन् । भेटघाटको अन्त्यमा डिनारालाई नेपाल आएर कसैसँग प्रेममा परिएको छ कि छैन भनेर ठट्यौली शैलीमा प्रश्न सोधिएको थियो । उनले जवाफ दिएकी थिइन्, ‘आइ डन्ट बिलिभ गाई’ अर्थात् ‘म केटा मान्छेलाई विश्वास गर्दिनँ ।’ शुक्रबारबाट ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण १३, २०७४ समय: १:५६:०४
जापान राेजगार : अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी एमओसीमा हस्ताक्षर हुँदै
एसईई परीक्षामा साढे ४ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागीता
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे फेरि संसद अवरुद्ध गर्ने राजपाकाे चेतावनी